2018 အမြင့်မြန်နှုန်းလိမ်တံခါးပေါက်အဆောက်အဦးပစ္စည်း China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > အလူမီနီခရုအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > 2018 အမြင့်မြန်နှုန်းလိမ်တံခါးပေါက်အဆောက်အဦးပစ္စည်း
စက်မှုဇုန်အပိုင်းတံခါးကိုအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်စက်မှုဇုန်ဝုဏ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်တင်ဒေသများအတွက်အသုံးပြုဤဒေါင်လိုက်-ဖွင့်လှစ်အပိုင်းတံခါးများလျှော့ခေါင်းကိုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူဒေသများရှိ installed နိုင်ပါတယ်, တစ်ကွေး overhead လမ်းကြောင်းနှင့်အတူဒီဇိုင်း။ သူတို့ကယင်း၏ပေါင်းစပ် panel ကိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူအပူနဲ့အသံ insulator တွင်လည်းသည်။
အဆိုပါစံပြင်ပြား 0.5mm အထူ, အရည်အသွေးမြင့်မားဇင့်အပေါ်ယံပိုင်းကနေ BS EN 10147 မှထုတ်လုပ်သောနေကြတယ်
တစ်ဦးက counterbalance system ကိုအကျိုးရှိစွာနှင့်အင်အားစိုက်ထုတ်စစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်ပုဒ်မ overhead တံခါးကိုသို့ထည့်သွင်းထားသည်။
အဆိုပါ counterbalance စမ်း၏ပါဝင်သည်မြင့်မားတဲ့ဆန့ helical ဒဏ်ရာသံမဏိဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးသံမဏိရိုးတံအပေါ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါဟာတစ်ဝှမ်း 50000 သံသရာများအတွက်ပိုကောင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ကုသအပူဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ counterbalance နှင့်ကေဘယ်လ်စနစ်ကလက်စွဲတံခါးများအဘို့ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်ရှေ့ကိုစစ်ဆင်ရေးပေးပါသည်။ လျှပ်စစ်စစ်ဆင်ရေးအားလုံး client ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အများအပြားအခြားရွေးချယ်စရာအော်ပရေတာရွေးချယ်မှုများထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုပိုကြီးတဲ့ application များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးကိုရာသီဥတုကာကွယ်မှုများအတွက်အပိုင်းတံခါးကို panel ကိုတစ်ဦး interlocking တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ပေါင်းစပ်ပူးတွဲအတွက် panel ကိုအပြည့်အဝအရှည်တံဆိပ်ခတ်ထား hinged ရှိပါတယ်။
2018 Rapid Rolling တံခါးအမြင့်မြန်နှုန်းကြိတ်စက် Shutter တံခါးများတည်ဆောက်ခြင်းပစ္စည်း
1. တံခါးကုလားကာ: PU မွှုပျထနှင့်အတူလူမီနီယမ်
2. ကုလားကာအထူ: 40 မီလီမီတာ
3. လူမီနီယမ်အထူ: 0.5 မီလီမီတာ
4. မထည့်အရောင်: Silver / ရွှေသတ္တု / စိမ်းလန်း / နီ
5. ဖွင့်ပွဲမြန်နှုန်း: 0.8 - 1.5 m / s
6. ပိတ်ခြင်းမြန်နှုန်း: 0.6 - 1.0 m / s
7. ဘေးထွက်ရထားရွေးချယ်စရာ: 2.0mm အထူအအေး-လိပ်သံမဏိစာရွက် (Bao သံမဏိ) / 2.0mm အထူသံမဏိ
8. ဖုံး box ကိုရွေးချယ်စရာ: 1.0mm အထူအအေး-လိပ်သံမဏိ shett (Bao သံမဏိ) / 1.0mm အထူသံမဏိ
9. မော်တော်အမှတ်တံဆိပ်: ချုပ် / Siemens
10. မော်တော်ပါဝါ: 550W / 750W / 1500W / 2200W / 4000W
11. ထိန်းချုပ်ရေးသေတ္တာ: Siemens / MITSUBISHI
12. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်: Airbag / ဓာတ်ပုံဆဲလ်
13. မထည့်ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်: Geomagnetic ညာဘက်, Radar, Stretcing ဝါယာကြိုး switch ကို, ချိတ်ဆက်မှု interlock, ကြိုး Pull, etc
ကျော်ကို 8 နှစ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် - သင်၏ပညာရှိသောသူရှေးခယျြမှု။
လူမီနီယမ်အလွိုင်းတာဘိုင် Hard Fast တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
က ISO 9001 တာဘိုင်သတ္တုလျင်မြန်စွာကြိတ်စက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်တာဘိုင် Hard Fast တံခါးဖွင့်လှိမ့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE အသိအမှတ်ပြုသတ္တုမြန် Spiral တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hot Sale သတ္တုအမြန်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hard Metal Fast Roller Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမီးသတ်စခန်းတံခါး အစာရှောင်ခြင်းခရုတံခါး အစာရှောင်ခြင်းသတ္တုတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်စက်ရုံတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်ဖိုင်ဘာတံခါး မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်တံခါး မြန်နှုန်းမြင့်ခန်းတံခါးတံခါး PVC မြန်နှုန်းမြင့်လှိမ့်တံခါး